Garoonka Banaadir oo loogu magac daray Yariisow
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho ugu magac daray duqii hore ee magaalada, Injineer Yariisow.
Garoonkaas, oo sidoo kale horey loogu yaqiin Koonis Stadium, ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabadan ballaaran oo lagu xusayey looguna duceynayay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow, oo 1-dii August magaalada Doha ugu geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax 24-kii July ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee Muqdisho.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay madaxda sare ee dowladda, oo ay ka mid yihiin madaxweyne Farmaajo, ra’iisul wasaare Kheyre, guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, iyo sidoo kale shacab aad u badan.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi ducada ayaa ku dhawaaqay in Garoonka Banaadir hadda kadib loogu magacdaray Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariisow).
Garoonka Banaadir waa mid ka mid ah garoomada ugu qadiimisan dalka, wuxuuna sanadihii ugu dambeeyey ahaa garoonka uu xiriirka kubadda cagta Soomaaliya u adeegsado tartamada iyo horyaallada kubadda cagta ee dalka.
Wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.